Ncedisa umntwana ogulayo angaba neendlela kunye nezindlela. Into ephambili kukuba ukwenze ngexesha elifanelekileyo! Kutheni sifuna uncedo lokuqala kunye nendlela yokuluhlela?
Xa iifoni zeelatine zingenakukwazi ukujamelana nokuhlaselwa kwegciwane kunye ne-bhakteria, intamo iqala ukuguga kwiimvuthu. Yintoni endiyenzayo? Ukuhlanjululwa! Brew herbs neempembelelo ezichasayo (i-wisdom, calendula), kunye nayo yonke imizuzu engama-30 isebenzise injongo yazo. Ingaba yincinci kakhulu encinci ukuyihlamba? Ngamaxesha amaninzi ngemini, uhlambe intamo ngentambo (umzekelo, "Chlorophyllipt").
Enye yeempawu eziphambili zalesi sifo ngumphunga we-runny. Nguye obangela intloko, iimvakalelo, ukungavumi ukudla (nokuba ngaba ubisi lomama!). Nangona kunjalo, injalo inhlekelele inokuncedwa! Ndiza kufuneka ndikhangele impumlo! Emva kokuba udale uncedo - uza kutsala kwisisombululo se-saline saline ("Aqua-Maris", "Saline", isisombululo saline), iphepha elikhethekileyo elinomxholo okhuni, ususe i-muscus kwi-spout. Ngaba umntwana usemdala ngokwaneleyo? Mcele ukuba aphule, achukumise enye okanye enye inye. Emva koko ucoce i-vasoconstrictive ("Vibrocil") okanye unyango ("Kollargol") amaconsi. Ngethuba lemini, ungamniki umntwana ishekhi, kodwa sebenzisa i-napkins elahlayo.
Kukholelwa ukuba indlela ephezulu yokunceda nokunyanga i-pneumonia yonyango lolwabiwo. Oku kunjalo ngokwenene. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha unokwenza ngokwenene ngaphandle kokuthatha iindlela ezinamandla. Ukugula kwinqanaba lokuqala kunokunyangwa ngeendlela eziqhelekileyo. Qi nisiwe!
• I-cottage cheese wraps inika impembelelo enkulu kwi-pneumonia. Thatha i-100 gram ye-cottage cheese ekwakhiweyo, uyibeke kwi-gauze uze uyifake iyure phantsi kwe-press (ukwenza i-serum yeglasi). Cinezela ubunzima obubekwe kwilinen ecocekileyo kwaye uyibeke kumntwana. Ukukhuseleka nge-shawl yeboya. Le bhanki kufuneka igubuke kude kube yilapho i-curd mass is.
• Isiraphu ye-radish ishicilelo esihle (namhlanje ungayifumana kwi-pharmacy!). Emva kokuba kuthathwa, i-sputum iyaqala ukwahlukana ngakumbi. Ukupheka imichiza yommangaliso? Ngokulula. Geza ingcambu encinci. Yinqumle i-funnel encinci kwaye ubeke intyatyambo yobusi kuyo. Emva koko faka i-radish kwisitya kwiindawo ezimnyama. Emva komhla, unike umntwana umbane kwi-groove nge-1 tsp 2 amaxesha ngosuku.
U bushushu obuphezulu
Xa uhleli phantsi ukulinganisa iqondo lokushisa, qiniseka ukuba i-armpit yakhe ayimanzi, kwaye ugcine i-thermometer engaphezu kwemizuzu engama-7. Imiqondiso engaphezulu kwe-38.5 C? Zama ukususa ubushushu nge-enema ngamanzi apholileyo, i-vodno-viniga. Kwaye ukuba le miqathango ayisebenzi, ndinike iyeza.
Ubomvu, ubuhlungu, amehlo abuhlungu kumntu omncinci uthi kufuneka usebenze ngokukhawuleza, mhlawumbi isifo siya kwasasaza kwelinye iliso. Oku kwenzeka kwimeko apho ngexesha ulandelelana malunga neminye yemigaqo yococeko - kweso nganye, ibhanti ehlukeneyo, isiponji, i-cotton swab!
• Ukunyuka kweeti ezimnyama (kuyafudumala!) Unempembelelo ye-antiseptic. I-Moisten kuyo isiponji, ngokukhawuleza udibanise kunye namaxesha amaninzi ngemini, usule amehlo omntwana ukusuka kwimbombo yangaphandle ukuya kwiikona zangaphakathi. Oku kucetyiswa ukuba uyenze nomhluzi we-nettle (amaqabunga ama-1 tsp eklasini yamanzi abilisiwe, uxinzelele amaxesha amaninzi). Eminye le mali.
• Ngokuxhomekeka kwi-pathogen (ibhaktheriya, iintsholongwane) kunye ne-conjunctivitis, ugqirha uya kunika amaconsi akhethekileyo kumntwana ("Sofradex", "Vizin"). Qiniseka ukuba ubangcwabe kwinkqubo ebhalwe ngugqirha, kuba yonke into ixhomekeke kwiminyaka yesigulane, kunye nesigaba sesifo. Uya kwenza konke okulungileyo-kwaye amehlo kwakhona aya kuba nempilo!
Ukukhupha umntwana kumkhwehlela kuya kunceda i-gymnastics yokwelapha. I-inhalation ye-steam, isiselo esikhethekileyo. Faka zonke ezi zinyathelo kwiinkqubo eziyinkimbinkimbi - kunye nesiphumo esihle siqinisekisiwe!
• Ukunyuka kwe-steam kuzisa ukukhulula ngesibetho esinamandla. Ngako oko, kufuneka ukuba kwenziwe, nangona ungenayo isisodwa esikhethekileyo-inhaler. Hlangana nesigubungelo esincinci kunye ne-coverlet kwaye ufumane amazambane athile abilisiwe okanye ukunyuswa kwepine buds (1 isipuni sesicu esiluhlaza kwiiglasi zamanzi abilayo). Ngaba umntwana uselula kakhulu kule nkqubo? Xa elala, faka isitya ngesitya esishushu esingaphantsi kombhede. Kuyo kuya kuba kuhle!
• Ukunqumla iikhiwane (1 isipuni sesithelo esiqingqiweyo, gcwalisa nge 300 ml yobisi), ubisi kunye noBergomi kunye nobusi (kwi-1/2 indebe yobisi olufudumeleyo, fakela isipuni 1 seBergomi kunye nobusi obancinci), sebenze ngokungenasiphelo: gcoba intamo uze unciphise umkhuhlane.
Zingaphi iiyure kufuneka umntwana alele
I-pollinosis: i-rhinitis ye-allergen emntwaneni
Imisebenzi yemidlalo eyincedo kunye nosana
I-pyelonephritis eqhelekileyo kwaye engapheliyo kubantwana
Indlela yokuphatha umqala wengqondo yomntwana
Inzuzo kunye neyingozi kwi-solarium kubantwana
Le mikhwa emi-14 iya kukuvuyisa kwaye inempilo
Ukulwa neentambo: ukushona kwelanga ngokuchanekileyo
Ukulungiselela ukusebenza kwentsasa yabantwana
Amaswitshisi kunye nenkukhu, isithombo kunye nobhontshisi
Ngaphakathi kwendlu yonyaka omtsha
Phrinta "i-goose-paw" - umendo wonyaka we-spring-2017
I-Salicylic Acid Peeling
UAlyona Shishkova noAndrei Chadov babonisa "iibhedi" zeefoto
I-potato pizza kunye ne-rosemary
Inkukhu i-zrazy kunye neziqhamo ezomileyo phantsi kwe-sauce yase-orange
I-Cottage shies soufflé ne-chocolate
I-cocktail yobisi kunye ne-mint
Iqela labasetyhini abaneempawu ezingenakuqondakala